प्रधानमन्त्री ओलीको १० दिनको उपचार खर्च २ लाख – Fewa Times
प्रकाशित मिति: December 5, 2019 5:39 pm
मंसीर १९, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको १० दिनको उपचार खर्च २ लाख ५५ भएको छ ।
गत मङ्सिर १० गते सामान्य पेट दुखेर गएका प्रम ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान,मनमोहन काडियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा एपेन्डिसाइटिसको समस्या देखिएपछि चिकित्सकहरु १० गते नै शल्यक्रिया गरेका थिए ।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका निर्देशक डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले १० दिन अस्पतालमा बसेर गरेको सम्पूर्ण औषधि उपचारमा २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए । अप्रेसन गरेर अस्पतालमा चिकित्सकको निर्गनिमा रहेका ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि आज १० दिनपछि डिस्चार्ज गरिएको हो । अस्पतालबाट बाहिरिँदा हात हल्लाउँदै सबैलै धन्यवाद दिदै आफु स्वास्थ्य रहेको बताएका थिए ।
बालुवाटार निवासमा पनि प्रम ओलीलाई आराम गर्न चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् । बाहिरी घाउ निको भए पनि भित्री घाउ निको हुन केही समय लाग्नेछ । हिँडडुल गर्न तथा धेरै उठबस नगर्न प्रम ओलीलाई चिकित्सकहरुले सल्लाहसमेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा उनका निजी चिकित्सक प्रा. डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा डा अरुण सायमी, प्रत्यारोपण विशेषज्ञ प्रा डा रमेशसिंह भण्डारी, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा उत्तमकृष्ण श्रेष्ठलगायतको चिकित्सकको समूह संलग्न थियो । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेन्टरमा जानुभई आजै प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यावस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।